Kubiza malini umshado namuhla? | Ezezimali Zomnotho
Kunolwazi oluningi olutholakala enetheni ukuze ukwazi ukubonisana futhi ube nesethenjwa se- ubiza malini umshado, ngoba kubaluleke kakhulu lapho ucabanga ngokuba nomshado kwazise empeleni kuyikho konke kodwa ngasikhathi sinye, bambalwa kakhulu imibhangqwana enebhajethi engqondweni ngaphambi kokuhlela.
Ukuba nesabelomali esihleliwe kuyinto edingeka kakhulu futhi ebaluleke kakhulu ngoba ngenxa yalokho, uzokwazi ukwazi ngendlela elula futhi esheshayo izinto nezindawo lapho imali yakho imiselwe khona, ngaleyo ndlela ugweme izindleko ezingenasidingo nezingadingekile Lokho kuzokwenza ukuthi imali yakho ingakhiqizi ngokwanele, kuzokufaka ezikweletini eziningi futhi ngeke uthole umphumela owufunayo kakhulu ngomshado wakho. Ukuba nesabelomali nokuzivumelanisa naso ngezinga elikhulu kuzokuvumela futhi ukuthi ugcine imali ethile ongayisebenzisa kwamanye amaphuzu adingekayo ngaphandle komshado.
Ngezansi sizokukhombisa amanye amaphuzu abaluleke kakhulu okumele abhekwe futhi ahlaziywe ekuhlelweni kwesabelomali sakho, ngasinye sazo sethulwa ngenhloso yokuba sicace futhi sikunikeze usizo olungcono kakhulu ukwazi ukuxazulula ukungabaza kwakho okuningi futhi ulungiselele iphakethe lakho lolu suku olubalulekile empilweni yakho.
Sicabanga ukuthi ngokuqinisekile ngosizo lwesabelomali futhi ubheka la maphuzu, ungakhipha izindleko ezingadingekile, hhayi izivakashi ezisondele kakhulu futhi mhlawumbe ugcine imali encane
1 Isabelomali esiphelele
1.1 Isayithi nabadlayo
2 Kungenzeka yini ukwehlisa izindleko?
2.1 Izimemo, izipho nemininingwane
2.2 Umthwebuli zithombe
Ngokwenhlolovo, njengamanje izindleko ezijwayelekile zomshado cishe zingama-euro angama-23.262.
Leli nani selivele libaluleke kakhulu futhi libalulekile yize lizohluka kakhulu ngokuya ngamathuba akho nemali oyitholayo, kuyinto obekufanele uyilungiselele ngaphambi kokuthi uqale ucabange ngalokho ongathanda ukuba nakho emkhosini wakho.
Zinqume futhi unamathele kunani elinqunyiwe njengesabelomali sesikhathi esinjalo, lokhu kuzokuvumela ngendlela elula kakhulu ukuthi ungachithi ngokubona ngokushesha ukuthi usebenzisa imali yakho kuphi futhi uma ngabe kuyinto emele isidingo sokuqala.
Uma ungeyena walabo abathanda ukusebenzisa iphepha nepensela noma bamane bakuthole kunzima futhi kungathandeki ukugcina i-accounting ngendlela yendabuko, ku-inthanethi kunezicelo zezimali ongazama ukuzilanda ukuze le nqubo yonke ibe ngaphezulu elula futhi esheshayo, ngakho-ke njengombhangqwana ningachitha isikhathi esiningi nicabanga ngalokho eningathanda ukuba nakho emshadweni wenu.
Isikhathi esikhulu sonyaka esikhethwe futhi esikhethelwe umgubho womshado siphakathi nengxenye yesibili yonyaka, cishe imishado engama-81% ihlelelwe ehlobo nasekwindla, ngendlela efanayo, amacala angama-53% abanjelwa emahhotela, emahholo omshado noma izindawo zokudlela.
Inombolo yezivakashi iyahlukahluka kakhulu kepha ibanga ngokwesilinganiso esiphakathi kuka-100 no-200, ngentengo ngekhava ngayinye ephakathi kwama-euro ayikhulu kuya kwayi-100.
Kungenzeka yini ukwehlisa izindleko?
Kukho konke okudingekayo, okunzima futhi okubaluleke kakhulu komphumela omuhle womkhosi, idili ngokungangabazeki ngumdlalo obiza kakhulu kuwo wonke umcimbi nenhlangano yakho.
Ngezikhathi eziphansi, kunzima ezindaweni zokuqasha izindawo zabo ngezimpelasonto, ngenxa yalesi sizathu, amanani azokwehla futhi ungathola amadili angcono.
Ngokunjalo, ngaphandle kwesikhathi esifunwa kakhulu, amahhotela nezindiza zizoba namanani aphansi kakhulu ngakho i-honeymoon yakho nayo izokubiza kancane.
Enye indlela ezokuvumela ukuthi unciphise izindleko ukuhlela isidlo hhayi isidlo sakusihlwa.
Izimemo, izipho nemininingwane
Kufanele unakekele imininingwane ngoba kubonakala sengathi ayinayo imali enkulu kepha ngemuva kokwenza izamba, izindleko eziningi ezincane zenza inani eliphakeme kakhulu lezindleko, khumbula, ungachithi kukho konke okungasebenzeli ukuthuthukisa umshado wakho.
Ukutshalwa kwemali okungaba ngu- € 410 yilokho okudingekayo cishe okuzokwabelwa izimemo.
Uma okudingayo ukunciphisa izindleko futhi unesineke esanele, isikhathi nokuzinikela, unga Yenza izimemo ngokwakho nomlingani wakho.
Imibono ingaba ngcono kakhulu kunokuthi ubathumele ukuthi bayenze futhi bayoba ngezifiso kakhulu. Uma ufuna, ungabheka futhi imibono ku-intanethi, igcwele imibono engakusiza futhi ikuvumele ukuthi wonge ama-euro angamakhulu ambalwa.
Ithathwa njengomkhakha wesihlanu obaluleke kakhulu kwezomnotho, futhi imele ukukhishwa okuphakathi kuka- € 1000 no- € 1500.
Kuhlala njalo kungcono ukuqasha ochwepheshe beqiniso abaqeqeshiwe nabanolwazi, kepha konke kuya ngesinqumo senu sobabili njengezithandani, uma ufisa futhi unobungani nosizo lwabangane abanolwazi olwanele kulo., ungamcela ukuthi anakekele sonke lesi sici, ngale ndlela wehlisa izindleko futhi ngasikhathi sinye usiza oxhumana nabo ngokwezimali.
Lo msebenzi uwela ngokuphelele kumkhwenyana, ngoba ubelokhu engumuntu odingayo ophethe ukukhetha izindandatho zomshado.
Izindleko abazenzayo zaleli banga lokutshalwa kwemali kungama- € 500.
Qhathanisa njalo amanani nekhwalithi, gwema nje ukuqhutshwa igama lomkhiqizo noma ukusungulwa, thola okuningi ngangokunokwenzeka kulokhu, funda ukuhlukanisa umehluko ezimfanelweni zezinsimbi namatshe ayigugu.
Ezimweni ezingama-78%, lezi zivame ukukhethwa ngumkhwenyana nomakoti, ezitolo ezikhethekile.
Ama-44% omakoti avakashela izitolo ezingama-3-5 ngokwesilinganiso bese azame ukugqoka okungu-10-19 ngaphambi kokwenza isinqumo.
Izindleko zokugqoka ziphakathi kuka-1.100 no-1.800 euros.
Ibhishi ngokusobala lingumkhuba ngaphakathi kwezindawo eziyisisekelo ngokusezingeni eliphezulu, okuhlala cishe izibalo ezingama-33%.
Ama-26% ohambo ahlala ezindaweni zamasiko.
Kuma-42% wabantu abasanda kushada bathanda futhi bathande izwekazi laseMelika, ngokuba yizindawo ezithandwayo ngaphakathi kwalo: I-United States yaseNyakatho Melika, iCaribbean kanye neNingizimu Melika
Isikhathi esivamile sohambo ngokuvamile singamasonto amabili.
Emibhangqwaneni engama-40%, izindleko zohambo lwangemva komshado ziphakathi kuka-1.000 3.000 no-3.000 5.000 wama-euro kodwa-ke, ngokuya ngombhangqwana nendawo okuyiwa kuyo, imibhangqwana ingachitha phakathi kwama-euro angama-XNUMX XNUMX no-XNUMX XNUMX.
Okubaluleke kakhulu ukukwenza ukuthi ngaphambi kokwenza noma isiphi isinqumo noma ukwamukela noma yiluphi uhlobo lohambo abakunikeza lona, ​​kufanele uqhathanise lonke inani leminikelo onayo, lokhu kungavela emithonjeni ehlukahlukene, kangangoba wena thamela ngqo futhi uqobo lwakho kuzo zonke izinhlaka zezokuvakasha ezinikezela indawo oya kuyo oyaziyo, kanye nalezo ozifunayo futhi ozithola kumasayithi e-inthanethi, eyokugcina iyindawo lapho ungonga khona izindleko zokucubungula.
Ungaba nabangane abaseduze nabakude asebevele benza uhambo lwabo lokuya esikhathini se-honeymoon ngakho-ke unganqikazi ukucela umbono wabo futhi usize nokubheka ukuthi bahamba kuphi futhi bazame ukuphatha ngqo.
Ukuba nomshuwalense wezokuvakasha onamandla okuhlanganisa kakhulu kubalulekile, ungawuthathi njengezindleko, khumbula, kungcono ukuvimbela futhi ungahlali kunesidingo futhi ungenakho.
Lapho uqasha uhambo kungcono ukuthi ukwenze konke okubandakanya, ngoba yize okwamanje kumelela izindleko eziphakeme kakhulu, izinzuzo ozozijabulela zizofanelekelwa ukubongwa.
Umhlobiso wezimbali ongomunye obucayi kakhulu futhi obizayo. Ukuqasha umculo, iziqhumane kanye nokunye okude, kubonisa izindleko zezinkulungwane zama-euro kwisabelomali somshado.
Akunakwenzeka ukukhombisa ukuthambekela okucacile kuzo zonke lezi zici ngoba kunezinhlobo ezingapheli nezinketho ezitholakala emakethe ezihambelana nokuthandwa nezidingo zomuntu ngamunye.
Indlela engcono kakhulu ukuqasha lezi zinsizakalo ngendlela efanele, ngaso sonke isikhathi kucatshangelwa isabelomali sakho namandla akho esikweletu.
Ungakhetha phakathi kokubeka ukuhlelwa kwembali etafuleni lomakoti nomkhwenyana, uguqule igumbi lokuphumula libe yipaki lezimbali ngezindleko zama-euro ayizinkulungwane.
Kwezomculo, amakamelo amaningi ano-DJ noma okokusebenza komsindo, uma ufuna ukuba ne-orchestra noma umculo obukhoma, kufanele ubheke ukuthi izindleko zizokwenyuka futhi uma kunjalo, ungasiki kakhulu ngoba Nginesiqiniseko sokuthi i-orchestra ebiza imali eshibhile izwakala kabi kakhulu futhi ichithe umcimbi wakho.
Lawa ngamanye amaphuzu azokwenza ube nesithombe esicace ngokwengeziwe ukwazi ukuthatha izinqumo ezifanele ngomkhosi wakho, siyazi ukuthi kuyinkohliso enkulu futhi sifuna ukuthola okungcono kakhulu kodwa uhlale ucabanga ngezinyawo zakho umhlabathi wokugwema ukuthi ukuhlelwa komcimbi onjalo kuba yisihluku ngemuva kokwenziwa kwawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Kubiza malini umshado?